गैंडाकोटलाई विकसित र समृद्ध बनाउन नै मेरो उमेदवारी |
गैंडाकोटलाई विकसित र समृद्ध बनाउन नै मेरो उमेदवारी
प्रकाशित मिति :2017-05-11 11:18:57
२० वर्ष पछि हुन लागेको स्थानिय तहको निर्बाचन संगै नेकपा एमालेको चुनावी चहलपहल देशैभरी उत्साहका साथ अगाडी वढिरहेको सन्दर्भमा नेपालको मध्यभागमा र संघीयताको विभाजनमा प्रदेश नम्वर चार अन्तरगत गैडाकोट नगरपालिकामा पनि एमालेको चुनावी चहलपहल उत्साहका साथ अगाडी वढीरहेको छ । पार्टीको निति र सिद्धान्तका कारण देशैभरी एमालेको विजय सुनिश्चित भइरहेको परीपेक्ष्यक्षमा गैडाकोटमा एमाले विजय उन्मुख छ ।
गैडाकोटको नगरपालिकामा नेकपा एमालेले यहाँका चर्चित , निष्ठावान , जनप्रेमी उमेद्वार छत्रराज पौडेललाई मेयर पदमा अगाडी सारेको छ । जनताको मनमा वस्न सफल छत्रराज पौडेल तीन दशक देखी विभिन्न जनवर्गिय संगठनका जिल्ला तहका मोर्चाहरु सम्हाल्दै कुशल संगठकको रुपमा स्थापीत नेताको रुपमा सवैले चिन्ने गर्नु हन्छ ।
पञ्चायती ब्यवस्थाको विरुद्धमा भएका आन्दोलनमा भुमिगत हुदै २०४६ सालको जनआन्दोलन र २०६२–६३ मा नवलपरासी र चितवनमा आयोजना गरीएको आन्दोलनका कार्यक्रममा अग्रपंक्तिमा सहभगिता जनाउदै प्रजातन्त्र प्राप्ति पछि अनेरास्ववियु नवलपरासीको संयोजक , हुदै गैडाकोटमा पार्टीको सदस्य , धेरै कार्यकाल सचिव जस्तो गरीमामयी पदमा रही गैंडाकोट जस्तो स्थानमा पार्टीको प्रभाव वलियो वनाउने काममा अहोरात्र खट्नुभइ पार्टी सदस्यहरु र समर्थकहरुको संख्या वढाउन खेलेको भुमिका निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ ।
२०५४ सालमा गैडाकोट गाविसको अध्यक्ष को प्रत्यासीको रुपमा निर्वाचनमा होमीएर झिनो मतका कारण निर्वाचनमा असफल हुनु भएका पौडेल हाल जिल्ला कमिटीमा सदस्यको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आउनुभएको छ ।
स्थानिय तहको निर्बाचन नजिकिदै गएको छ । निर्बाचनमा कत्तिको लाग्न’भएको छ ?
बिशेष गरी २० वर्ष पछि मुलुकमा भिन्नै तरीकाले स्थानिय तहको निर्बाचन हुन लागिरहेको छ । निर्वाचन घोषणा संगै आम जनसमुदाय र विभिन्न राजनैतिक दलहरु अत्यन्तै उत्साहका साथ लागिराख्नुएको छ । यो निर्वाचनले स्थानिय क्षेत्रको बिकासले गति पाउँछ भन्नेमा आम जनताले आशा र भरोषा गरिरहेका छन् । केन्द्रीतहमा रहेका विभिन्न अधिकारहरु जनताका घरदैलोमा आएकाले जनताहरुमा थप उत्साह पैदा भैरहेको ले पनि स्वाभाविक रुपमा हामी र हाम्रा उमेद्वारहरु निकै उत्साहका साथ जितलाइ निश्चित गर्दै निर्बाचनमा लागिरहेका छौ । साथै सक्रियता पूर्वक जनताको बिचमा पुगिरहेका छौं ।
गैडाकोट नगरपालिकाको मेयर पदमा उमेद्वारी दिनुभएको छ । यहाँको उमेदवारी के का लागि र किन हो ?
सामाजिक जीबनमा लागी परेर निरन्तर राजनैतिक र सामाजिक काममा लाग्दै आईरहेको छु । मैले मेरो जिबन नै समाजको निम्ती सर्मपण गर्दै आएको छु । म जनताको शुखःदुखमा नजिकमा रहेर निरन्तर लागी पर्दै आएको उमेद्वार भएको कारण पनि मेरो उमेदवारी हो । साथै छोटकारीमा भन्नुपर्दा गैडाकोटलाई बिकसित र समृद्ध बनाउन नै मेरो उमेदवारी आएको हो । यहाँका आम जनताको विकास प्रतिको चाहना अझै पुरा हुन नसकेको परीप्रक्षमा मेरो उमेदवारी आएको कुरा मइले मात्रै आम मतदाताले पनि वताइसक्नुभएको छ । एउटा दलमात्र नभएर अन्य पार्टीहरुले पनि मलाइ साझा उम्मेद्वारको रुपमा अगाडी वढ्न गरेको अनुरोध र सहयोगलेपनि मेरो उमेदवारीको विषयलाइ थप पुष्टी गर्दछ ।
तपाइले धेरै समस्याहरु देखाउनुभयो । यति धेरैसमस्या समाधान गर्नका लागि कस्ता कस्ता योजनाहरु छन् त यहाँसंग ?
वास्तबमा इच्छा शक्ति भयो भने जे कुरा पनि सम्भव छ । हामी र हाम्रो पार्टी यो देशका जुन सुकै समस्याहरुको समाधान गर्नकालागि स्पष्ट धारणा सहित आएको कुरा तपाइलाइ थाहा नै छ । जतिवेला हाम्रो पार्टीलाइ सरकारको वागडोर प्राप्त हुन्छ त्यतिवेला जनताको पक्षमा ल्याएका कार्यक्रमहरुले धेरैकुराहरुलाइ पुष्टी गरीसकेको छ । जहा सम्म गैडाकोटको समस्या समाधान गर्ने कुरा गर्नुभयो , म यस क्षेत्रको समस्या समाधानको लागि नयाँ सोच र योजनाको साथमा आएको छु । क्षमता र योग्यताका आधारमा मान्छेले जब नयाँ योजना र लक्ष्य सार्छ तब कठिन कार्य पनि सफलता पुर्वक सम्पन्न हुन्छन् भन्नेकुरा मा म विश्वास गर्ने मान्छे हुँ । हामी भिजनका साथमा आएकाले पनि यहाँ देखीएको समस्या जनताको चाहना अनुसार पुरा गर्छौ । यसमा म प्रतिको विश्वास पनि छ यहाँका जनताको छ । म त्यस कार्यमा अगाडी बढ्न पुर्ण प्रतिबद्ध पनि छु । मैले भनिसके हामी संग त्यो बैद्धिक पङ्ती छ, जसले कुनै काम पनि सजिलै सम्पन्न गर्न सक्छ । त्यस्तो युवा पंक्ति छ जसले कुनै पनि कामलाइ सजिलै सहज तरीकाले सम्पन्न गर्न सक्छन् ।
यहाँको विजय सुनिश्चित छ भन्ने सुनिएको छ । के आधारहरु छन् जसकाकारण तपाइको जित सुनश्चित हुनुमा ?
अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय उठान गर्नुभयाे । हाम्रो पार्टी नेकपा एमाले र यस पार्टीैमा आवद्ध सवै नेता तथा कार्यकर्ता अनि समय समयमा हाम्रो पार्टीले ल्याएका जनपक्षीय कामहरु नै समग्र एमाले उमेदवारहरुको जितको आधार हो । कुनै वेला वृद्ध भत्ताको वाड्ने कल्पना पनि नगरेको समयमा वृद्ध वृद्धाहरुको सम्मानका लागि वितरण गरीएको वृद्ध भत्ता जस्ता कल्याणकारी कार्यदेखी आफ्नो गाँउ आफै वनाउ लगायतका कामहरुले मुलुकभरी नै जनता एमालेप्रति आकर्षीत भइरहेका छन् । यी पनि मेरा जित सुनिश्चिित छ भन्ने कुराको प्रमाण हो ।यता गैडाकोटको कुरा गर्ने हो भने विगतको जस्तो कुनै एउटा पार्टिकोगढको रुपमा छ भन्ने कुरा प्रति विश्वास नगर्दा हुन्छ । विगतलाइ हेरेर हामीले जित्छौ भन्दै हिड्ने ती दलहरुले अहिले दिउसै सपना देखेर रमाएको अनुभुति मलाइ भइरहेको छु । अहिले गैडाकोटमा एमालेको राष्टियता प्रतिको अडान , जनपक्षीय कार्यहरुका कारण एमालेमा कार्यकर्ताहरुको भिड लागीरहेको छ । त्यस्तै उनिहरुले एमाले ले वाहेक अरु कसैबाट गैडाकोटको समस्या समाधान हुनै सक्दैन भन्ने कुरा मा पनि सर्वसाधारणले विश्वास पनि गरेका कारण र हाम्रो जनपक्षीय उमेद्वारहरुको पंक्तीको कारणलेपनि मेरो जित सुनिश्चित वनाएको छ ।
पर्सा एमालेको पक्षमा, प्रदेश दुईको महानगरमा सूर्यध्वजा फहराउने तयारी